AnIyo Amazon Alexa chaiyo mubatsiri inowedzerwa kune yako distro? | Linux Vakapindwa muropa
Pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekugona kushandisa virtual mubatsiri pane yako GNU / Linux distro, kuitira kubvunza kana kuita kuburikidza nemirairo yezwi Ose maviri maApple eApp uye eApp anoshanda atove nevabatsiri vakaita seGoogle Mubatsiri uye Siri zvakateerana, pamusoro pekuva neCortana paWindows. Asi, muGNU / Linux zvakatonyanya kukanganikwa nevagadziri veaya masisitimu, kunyangwe izvo zvisingakutadzise kuva nazvo, sezvauri kuona.
Kana vakagadzira zvechinyakare maapp sezvo zvave kutovepo kune mamwe akawanda masisitimu anoshanda uye zvishandiso, zvese zvaizove zviri nyore uye zvaizobatanidzwa zviri nani. Parizvino, sarudzo dzese dzinoenda nekuyedza "kutenderedza" maapps aya kuti ugone kuashandisa mune yako yaunofarira distro nekutevera imwe yenzira dzandinoratidza pano ...
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, kune mamwe maapplication aripo anove asina chokwadi kana asingashande mushe kushandisa irwu rudzi rwevabatsiri natively (semuenzaniso: Alexa). Mukushaikwa kwemapurogiramu epamutemo, iwe unenge uine chete tsvaga idzi dzimwe nzira:
Unogona kusarudza kuisa admin emulator mune yako distro, zvingave sei Bhokisi. Neprojekti iyi iwe unozokwanisa kuisa chero yemuno Android app kuti ukwanise kuishandisa, uye izvo zvakare zvinosanganisira kugona kuisa yepamutemo Alexa app yeGoogle inoshanda sisitimu.
Imwe nzira yekuita pamusoro apa ndeiyi shandisa WINE kana muchina weWindows wekuisa iyo yechinyakare Alexa app yeMicrosoft operating system. Zviripachena, iyo WINE sarudzo iri nyore, saka haufanire kuvhura iyo MV pese paunoda kushandisa Alexa.
Chekupedzisira, imwe nzira ndeyekutevera dzidziso iyi kugadzira mudziyo Amazon Echo inoenderana neLinux.
Kuti wizard iwanikwe Google AssistantSeimwe nzira kune Alexa, iwe unogona zvakare kutevera nhanho dzakafanana, sezvo iri zvakare inowanikwa kune masisitimu senge Android natively, saka iine emulator (kana iyo Android x86 MV) iwe unogona kuitora futi.
Kana iwe uchida Siri Une zvishoma zvakaoma, nekuti zvaizoitika nekushandisa muchina chaiwo une macOS uye kubva pasimba iri kushandisa Apple mubatsiri ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Anogona here Amazon Alexa virtual mubatsiri kuwedzerwa pane yako distro?
Angelo gabriel akadaro
Pane chimwe chinhu chiri nani pane zvese izvo sarudzo, kana iwe uine imba yeGoogle pamba kana dheti yeerekero, edza izvozvo https://www.triggercmd.com/es/
Pindura kuna Angelo Gabriel